Lakkoofsi namoota Mooyaaleetti ajjeefamanii 10 gahe - BBC News Afaan Oromoo
Haleellaa raayyaan ittisa biyyaa guyyaa Sanbataa 'ragaa dogoggooraatiin' jedheen jiraattoota magaalaa Moyaalee irratti baneen namoonni 10 ajjeefamuu, kanneen 12 ta'an ammoo miidhaa'uufi jiraattoonni kumaatamaan lakkaa'aman ammoo daangaa qaxxaamuruun gara Keeniyaatti ce'u saanii barame.
Bakka bu'aan sakretaraatii olaantummaan hojiirra olmaa labsii yeroo muddamaa to'ataa jiru, Letanaal Janaraal Haasan Ibraahim ibsa midiyaa motummaa EBCf kennaniin, miseensoonni raayyaa ittisa biyyaa shan sababii 'ragaa dogogoraatiin' dhukaasa jiraattota irratti bananiin lubbuun namoota darbu dubataniiru.
Naannichatti gareen waraanaa tokko qubate kan argamu yoo ta'u, dirqamni garee kanaaf kennamees kan labsii yeroo muddamaa waliin walitti hin dhufne ta'u kan dubattan letanaa konaleen Haasan, gaheen garichaa miseensoota adda bilisummaa Oromoo gara naannichaatti seenan to'achu ta'u ibsaniiru.
Miseensoonni haleellaa rawwatan shan oggantuu garee dabalatee akka hidhanoosaanii hiikkatan taasifamuun qorannoon irratti gaggeefamaa jiraachu kan himan bakka bu'aan sakretaraatichaa, gareen aanga'oota olaanoo ittisa biyyaa keessatti argamanis gara naannichaatti qajeeluun hawaasa ni tasgabbeessuus jedhaniiru. Kantiibaan Magaalaa Mooyaale Obbo Aschaalo Yohaannis, jiraattoonni naannichaa keessattu lafa Shawaa Barri fi duwwaa tokko irraa baqachuun gara Keeniyaatti ce'uusaanii BBC'tti himaniiru.
Kana malees sirni awwaalcha namoota ajjeefamanii muraasi raawwatamuufi kanneen ammoo gara lafa dhaloota isaanitti ergamu obbo Aschaaloon himaniiruJiraataan magaalattiifi hojataa waajjira sivil sarvisii magaalaa Mooyaalee kan ta'an tokko BBC'tti akka himanitti, namoonni magaalattiifi naannoo ollaa irraa baqachuun gara Keeniyaatti ce'an tilmaamaan kuma kudha ni ta'u jedhaniiru.
Bulchaan Aanaa Obbo Bagajaa Mooyaalee gama isaanitiin lafa Caamee jedhamtuufi magaalaa irraa fageenya kilomeetira muraasaa irratti bakka argamtutti kaleessa dhukaasni jiraachuufi yoo xinnaate namni tokko madaa'usaa himaniiru.